Apple waxay samayn doontaa tijaabooyin COVID-ku-noqosho joogto ah shaqada Oktoobar | Waxaan ka imid mac
Apple waxay qaban doontaa tijaabooyin COVID-ku-noqosho joogto ah bisha Oktoobar
Manuel Alonso | 19/09/2021 17:00 | Xanta
Apple waxay rabtaa inay sida caadiga ah ku soo noqoto Waxa uu isku dayayaa in uu shaqaalaha intiisa badan dib ugu celiyo xafiisyada Apple Park. Si kastaba ha ahaatee, ma sahlana maxaa yeelay, si ka duwan shirkadaha kale ee la midka ah, tallaalka lagama rabo shaqaalaheeda. Si kastaba ha ahaatee haa samee baaritaanno joogto ah si looga fogaado caabuqyada suurtogalka ah ee coronavirus ku soo noqoshada shaqada fool-ka-foolka ah ee la filayo inay bilaabato Oktoobar.
Waxaa jiray hadal dheer oo ku saabsan suurtogalnimada in shaqsi ahaan loogu noqdo Apple Park. Waxay u muuqataa in shirkaddu rabto. Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha qaarkood weli uma arkaan suurtogalnimadaas mid cad. Waxaan ka shaqaynaynay guriga muddo sannad iyo badh ah (kuwa shaqadoodu saamaxdo) iyo lsoo noqoshada fool-ka-foolka ayaa adkaata Ama ugu yaraan laguma samayn doono muddo gaaban. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku dhow nahay Oktoobar mana aha oo kaliya shirkadda tufaaxa ee Mareykanka waxay rabtaa inay dib u hesho xoogaa caadi ah. Shirkadaha waaweyni waxay rabaan xiriirkaas shaqaalaha dhexdiisa mar kale.
Shirkadaha qaarkood waxay u baahan doonaan inay tallaalaan shaqaalahooda. Waan ognahay in tallaalku wax badan caawinayo, laakiin kama hortago caabuqyada, sidaa darteed waa lagama maarmaan in la sii wado tallaabooyinka. Sidan oo kale Apple marka uu shaqada ku soo noqdo shaqsi ahaan Ma dhaqangelin doonto shardiga tallaalka laakiin waxay samayn doontaa baaritaanno joogto ah shaqaalaha haysta Baaritaanka COVID-19. Waxay u badnaan doonaan shaqaalaha aan la tallaalin marka loo eego kuwa qaatay labada qiyaasood.
Markaa ugu yaraan waa la ururiyaa joornaalka khaaska ah, Xaqiiqda. Waxay ku sheegteen tweet -ka, hadda waa la tirtiray, duruufahan dib ugu noqoshada "dugsiga" ee Apple. Ma garanayno haddii shuruudahan ku noqoshada shaqada ay ugu dambayntii waxtar yeelan doonaan ama haddii ay ahayd mala awaal. Waxaan arki doonaa waqti dhow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxay qaban doontaa tijaabooyin COVID-ku-noqosho joogto ah bisha Oktoobar
Apple Find My‌ ayaa loo daahi doonaa ‌AirPods Pro‌ iyo ‌AirPods Max‌
Acapulco, oo lagu toogtay Isbaanish iyo Ingiriis, ayaa lagu soo bandhigay Oktoobar 8 -keedii Apple TV +